သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်တရားမဝင်ပါ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 30, 2010 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
ရှေ့နေဒေးဗစ်ကက်စထရိုတစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် SaaS စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးပြုရှေ့နေကုမ္ပဏီ, သောသတင်းနှင့်အတူတနင်္ဂနွေကျော်ငါ့ကိုမေးလ်ပို့ပေး FTC သည်၎င်း၏ပထမဆုံးသားကောင်နှင့်အတူအခြေချခဲ့သည် ထုတ်ဖော်ဥပဒေအသစ်များ။
အဆိုပြုထားသောအခြေချမှု (PDF) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့် PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် Reverb ဆက်သွယ်ရေး ပိုင်ရှင် Tracie Snitker သည် Reverb ၀ န်ထမ်းများမှသာမန်ဖောက်သည်များထံမှရေးသားထားသော iTunes ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Reverb နှင့်၎င်း၏ဂိမ်း developer ဖောက်သည်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထုတ်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ Fver အရအဆိုပါသဘောတူညီချက်သည် Reverb နှင့် Snitker တို့အားလွတ်လပ်သောစားသုံးသူများထံမှဟန်ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်၎င်း၏ဖောက်သည်များအကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆိုလျစ်လျူရှုသော iTunes နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများထပ်မံပြုလုပ်ရန်တားမြစ်ထားသည်။
ဒါကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ် ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်း၏လမ်းမှထွက်မသွားဘဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ် PR ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုမသေချာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှနေရာတိုင်းတွင်မြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အများပြည်သူအားလှည့်စားလိုသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူတို့ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်များကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြုအမူများကိုအချိန်တိုင်းထုတ်ဖော်ရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အမှတ်အသားများစွာကိုလွတ်သွားသည်သေချာသည်။
ဒါကအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်မှတ်ချက်နည်းဗျူဟာများ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ ရာထူးတိုးမှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စသည်တို့ကိုတပ်ဖြန့်လိုသောကြောင့်…အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း၌ပြီးမြောက်ပြီးကုမ္ပဏီနှင့်ဖောက်သည်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါကရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
လိမ့်မည် နာဆာ အင်တာဗျူးတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စပွန်ဆာတွေကို ဦး ထုပ်ဆောင်းထားတယ်၊ ဆိုဒါတွေဘာတွေသောက်နေတာလားဆိုပြီးကြေငြာရမလား။ သူတို့က bumper စတစ်ကာတစ်ခုစီကိုဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ရန်လိုပါမည်လား။
လိမ့်မည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီများ (PACs) သည်ဆိုဒ်တိုင်းရှိမှတ်ချက်တိုင်းကို၎င်းတို့သည်နိုင်ငံရေးသမားနှင့်လစာကောင်းသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာရမည်။ အွန်လိုင်းမဲရုံများကိုဖြေဆိုရန်ထောင်နှင့်ချီသောသူများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စေလွှတ်မည်နည်း။
ငါတစ် ဦး အတွက် client ကိုဖော်ပြထားလျှင် တင်ပြချက်သို့မဟုတ်မိန့်ခွန်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
အဘယ်သို့သောအကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေနှင့်နောက်လိုက်အရေအတွက်? ငါဘယ်လောက်အထိငါ့နောက်လိုက်တယ်၊ ငါလိုက်တဲ့လူဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ကျွန်ုပ်မှာနည်းလမ်းမရှိဘူး။ ထိုအရေအတွက်သည်အများပြည်သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုယိမ်းယိုင်စေပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုသည်မဟုတ်လော။
ကိုယ့်တစ် ဦး ရေးသားခဲ့သည် စာအုပ် blogging ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့်ရောင်းချသူများ (ဥပမာ - Castor Alerding) စာအုပ်ထဲတွင်ဥပမာအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၌စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုရှိနိုင်သည်၊ တစ်ချိန်ကရှိခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်မထုတ်ဖော်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒဏ်ရိုက်ခံရပါမည်လား။
လိမ့်မည် ထုတ်ကုန်angelဝံဂေလိဆရာ ညီလာခံများ၌သူတို့ဖောက်သည်များ၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းပြောဆိုသွားမည့်တံဆိပ်သို့မဟုတ် ဦး ထုပ်ဆောင်းရန်လိုသည်။
တစ်ခါတလေငါ ပစ်မှတ်ကုမ္ပဏီများမှ သူတို့အကြောင်းရေးပါ၊ ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်မှာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပါ။ ငါသူတို့ကော်ဖီ ၀ ယ်နေချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ငါသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေသောကြောင့်ငါလုပ်နေတာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သောအခါငါထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
လိမ့်မည် ကျော်ကြား ယခုအခါကြော်ငြာများတွင်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်များသည်၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လခပေးသောထောက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းသင့်အားပြောရန်နှင့်အဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ဥပဒေကတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် လှည့်စား အလေ့အကျင့်များကျင့်သုံးသော်လည်းပြtheနာမှာကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ twitter အကောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook အခြေအနေ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏အရေးအသားအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်ဆံမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ ၀ င်ငွေသည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားမည်မျှစျေးကွက်တင်သည်ကိုအခြေခံသည် ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အတွက်လခကောင်းသည့်ထောက်ခံသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူကိုမဆိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်စားအခွင့်အာဏာ၊ အသိအမြင်နှင့်evဝံဂေလိတရားကိုတိုးမြှင့်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါဘယ်သူ့ကိုပြောမလဲ။ !
ငါ့လက်များကိုယခုငါ့အပေါ်မှာ တင်၍ သော့ကိုပစ်ချလိုက်နိုင်သည်။
ဒါမှမဟုတ်ငါကနေဒါကိုပြောင်းပြီးငါလုပ်နေတာတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်တယ်။ လစ်ဟာနေသောလူတွေရှိတယ်။ မင်းရဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုများကိုကမ်းလွန်သို့ပြောင်းရွှေ့ပါ။
Tags: Castor alerdingDavid Castorဖွင့်လှစ်ခြင်းFTCတရားမဝင်သောရှေ့နေဥပဒေရေးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဥပဒေများ
Facebook ၏ Analytics မှအကျိုးရယူရန်နည်းလမ်း ၅
သြဂုတ် 30, 2010 မှာ 11: 04 AM
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့တွန်းပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာကကြော်ငြာကိုယေဘုယျအားဖြင့်တရားမ ၀ င်အောင်လုပ်တာလား။
သူတို့သည်ပြည်သူလူထုအားခရက်ဒစ်အကြံပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများလှည့်စားရန်မြေပြင်မှဆောက်လုပ်သောကုမ္ပဏီများအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ အိုးငါကျယ်လောင်သောအသံထွက်ပြောခဲ့တာလဲ ဟားဟား
30:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 00
ခင်ဗျားပြောတာကရယ်စရာကောင်းတယ် Preston! FTC သည်အကြွေး ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စာမျက်နှာ ၂၀၀ ကျော်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၌လုပ်ငန်း၏အကောင်းဘက်ဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းတို့သည်ထိုလှည့်စားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, အဆုံးစွန်အမြီးအမောက်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်စားသုံးသူများကိုဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနေသည်။ သို့သော် Feds သည်အချို့သောကုမ္ပဏီများကယင်းကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားကြသည်!
ငါသည်သင်တို့ကိုအကြွင်းမဲ့သဘောတူသည်။ ဤသည်သည်စီးပွားရေးကိုဟန့်တားရန်မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုနိုင်ငံခြားနှင့် FTC လက်လှမ်းမမီသောနေရာများသို့ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
30:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 22
အမ်၊ ထိုဥပမာအားလုံးမှန်ကန်သောနှိုင်းယှဉ်ချက်များသည်မည်မျှသေချာသည်ကိုသေချာမသိပါ။ ဤသည်မှာသုံးစွဲသူအားမသိရှိဘဲသင့်အားပေးရမည့်အရာများကိုပြောရန်ဟန်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်ပြောရန်ငွေရနေပြီးယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်မှာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ဒါကလူတွေလိမ်ပြောခြင်းဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့နေရာတွေအကြောင်းပါ။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး မှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်တစ်ခုခုပြောခြင်းရှိသည့်တရားဝင်ကုမ္ပဏီအများစုသည်ဂိမ်းကိုချစ်မြတ်နိုးသော ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်သို့မဟုတ် Amazon ကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုနှစ်သက်သောမိခင်တစ် ဦး အဖြစ်ဟန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားမည့်အစားအချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။ ငါရေးသားတဲ့သူရဲ့ရိုးသားမှုဟာတကယ်တော့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေတယ်။
နာစကာ - စပွန်ဆာတွေကအဲဒီမှာနေဖို့ငွေပေးတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။ ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြဖို့မလိုဘူး။ ယခုတွင်ပျော်စရာကောင်းသည်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများကကမကထပြုထားသောကားများအားလုံးမြင်ရန်အတွက်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုသည့်နောက်တွဲယာဉ်ကိုဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ 🙂
PACs - ဒီဟာကထပ်တူထပ်မျှဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သော်လည်းနောက်ထပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်ပြissueနာဖြစ်သည်။
တင်ဆက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ - ငါလူအများစုကလုပ်သင့်သည်ထင်သည်။ ဥပမာသာဓကတစ်ခုအနေဖြင့်သင်အသုံးပြုနေသောလူအများစုကသင့်အားသင်ငှားရမ်းခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုအကြောင်းလူအများအားသိစေချင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တဲ့ (ဥပမာအားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တွေဖြစ်တဲ့) ဥပမာတစ်ခုပျောက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ပန်ကာတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်တန်ဖိုးမရှိသောကြောင့်တကယ်တော့ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ ငါ့နောက်ကြွလာသောသူသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ရဲ့အရေအတွက်ကိုအသုံးချပြီးတန်ဖိုးမဲ့နံပါတ်များဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကြော်ငြာဖို့မင်းရဲ့အရေအတွက်ကိုသုံးတာလား။
စာအုပ်တစ်အုပ်တွင်ကျွန်ုပ်တွင်မိတ္တူတစ်စုံ (တောင်းပန်ပါသည်) မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းစာအုပ်၌သင်မည်သို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမသေချာသော်လည်းထိုဆောင်းပါးကထိုတွင်ဆက်နွှယ်မှုရှိကြောင်းသိစေရန်ပုံရသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်သင်၏ယခင် / လက်ရှိဖောက်သည်ဖြစ်ကြောင်းပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နိုင်ပေမည်၊ သို့သော်မည်သူကမျှထိုစာအုပ်ကိုသူတို့ဘက်မှပံ့ပိုးသည်ဟုသူတို့ပြောသောကြောင့်စာအုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဘက်မလိုက်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူတို့ကိုကြည့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ယခုသင်စာအုပ်ထဲတွင်ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့လျှင်သင်ဆိုက်တွင်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းတစ်နေရာရာမှာဖော်ပြရန်မျှော်လင့်ပါသလော။ သို့သော်သင်ပြောနေသည့်အရာနှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပိုအရေးကြီးသည် (ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးမပြုခြင်းကိုသင်အတိအကျမသိပါ။ 'မင်းလုပ်ခဲ့တာကိုမှားတယ်လို့ယူမှတ်ရင်တော့ငါမပြောတတ်ဘူး')
ငါဤမှတ်ချက်များကို2မှတ်သို့ခွဲခဲ့ရတယ်
ကုန်ပစ္စည်း ev ၀ ံဂေလိဆရာ - ဟုတ်ကဲ့! မင်းပြောနေတာကလူတွေဆီကပိုက်ဆံရရင်မင်းကမင်းကိုပြောတာပိုကောင်းတယ်။ အကယ်၍ MS သည်လူအများအပြားကို MS ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါကသစ္စာစောင့်သိသောသုံးစွဲသူများအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာ၎င်းတို့ကိုသူတို့ထုတ်ကုန်ကိုသူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းအားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုရေကြောင်းသွားနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် WP အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းအတွက်အချိန်သိပ်ကြီးသည်ဟုဖော်ပြရန်သေချာသည်။ ငါလူတွေကိုအရာတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ငွေရှာပြီသော်လည်း)
ကော်ဖီ ၀ ယ်ခြင်း။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်လုပ်သောအခါရောင်းရန်ဘာမျှမရှိဟုတစ်စုံတစ် ဦး ကယုံဖို့ခက်သည်။
စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာများ - တကယ့်လူတစ်ယောက်ပြောနေသည့်အချိန်တွင်သူတို့သည်“ အခကြေးငွေပေးသောသက်သေခံချက်” ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။ နောက်တဖန်ငါက၎င်း၏ '' သူတို့ကဘယ်သူမှကြောင့်မေးခွန်းထုတ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပေးထားသောထင်ပါတယ်။
ငါထင်တာကတော့နောက်ဆုံးမှာပြောနေတာရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပဲ။ အခြေအနေတော်တော်များများမှာကြော်ငြာခံရတဲ့အခါငါတို့သိပြီး၊ လူတွေကိုလွင့်စင်သွားစေနိုင်တဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့အခါ (စာမူတွေ၊ ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်တဲ့သတင်းစာကြော်ငြာတွေကိုကြော်ငြာတင်တာ) ။ လူတွေကဘယ်သူ့ကိုအတုလုပ်ချင်တာလဲ။ သူတို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဆက်ဆံရေးဟာ။ ငါရိုးသားတဲ့ကြော်ငြာအလေ့အကျင့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးဖြိုဖျက်ဖို့သိက္ခာမဲ့ခြင်းနှင့်ညစ်ပတ်သောသူမြားစှာရှိနေတုန်းပဲကြောင့်စိတ်ရှုပ်စရာဘာမှရှိသည်ထင်ကြပါဘူး။
30:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 29
သင်သည် @ripsup ၏ယူဆချက်များစွာကိုပြုလုပ်သည်၊ သင်၏နောက်ဆုံးစာပိုဒ်သည်ကျွန်ုပ်၏အငြင်းအခုံတစ်ခုလုံးကိုထောက်ခံသည်။ "ဒါဟာအားလုံးရိုးသားမှု ... ရည်ရွယ်ချက်မှဆင်းလာပါတယ်။ " အနည်းဆုံးတော့မင်းနဲ့သဘောမတူဘူး ဒီတော့… ကျေးဇူးပြု၍ FTC သည်ကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမည်သို့မည်ပုံဆုံးဖြတ်မည်ကိုရှင်းပြပါ။
30:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 11, 32
FTC သည်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုသာရှိပါကပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ယင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး အဖြစ်ဟန်ဆောင်နေလျှင်သို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်ထုတ်ကုန်များအပေါ်အပြုသဘောဆောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သော) ပြောခြင်းမှဘဏ္benefitာရေးအကျိုးအမြတ်တစ်ခုခုရှိသည်ဟုသင်ပုန်းနေလျှင်၎င်းကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။ ဆောင်းပါးထဲမှာကပြောပါတယ်
"Reverb သည်အစိုးရနှင့်အတူပူပြင်းတဲ့ရေထဲကို ၀ င်ရောက်သွားပြီးပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်လွတ်လပ်သောစားသုံးသူများထံမှလာသည်ဟုထင်ရသည်။ ၎င်းဂိမ်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ငှားရမ်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးမည်သည့်ရောင်းအားကိုမဆိုရောင်းချခဲ့သည်။ "
မင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုဒ်ကိုမင်းသဘောတူတယ် (ငါသိထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆုံး) ပြောတာကိုသဘောတူတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့မှာပြissueနာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ ChaCha ကိုတစ်နေ့လုံး pimping လုပ်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင့်ကိုလခပေးရတဲ့အချိန်မှာသင်ဟာလွတ်လပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါလို့ပြောရင်ဒါဟာပြissueနာတစ်ခုပါ။ အခြားကြော်ငြာကဏ္ this အားလုံးတွင်ဤပြissueနာသည်ပြaနာရှိကြောင်းနှင့်စားသုံးသူအားအကြောင်းကြားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အရင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်ဒီဥပမာတွေနဲ့ပြissueနာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ဘေးထွက်မှတ်ချက် - ငါကြော်ငြာတာထက်ပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့ယူကေရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုငါကြိုက်တယ်။
သြဂုတ် 31, 2010 မှာ 6: 17 AM
အမြဲတမ်းမရိုးမသားရောင်းချသူများအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ လူမှုရေးအရဤစကားလုံးများသည်စကားလုံးများပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဝယ်သူကသတိပြုပါ ကျွန်ုပ်တို့မှာကိုယ်ပိုင်တာဝန်မရှိတော့ဘူးလား။ ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာစျေးကွက်သမားများနှင့် PR စနစ်များသည် FTC ၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်။ ကြောက်လန့်ခြင်းကြောင့် (အမှန်တကယ်တွင်လမ်းညွှန်ချက်များမဟုတ်ဘဲဥပဒေများမဟုတ်ပါ) အနေဖြင့်ပိုမိုရိုးသားသောအလုပ်များသည်ကမ်းလွန်သို့ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အစ်ကိုကြီးကြီး၊ ငါမခံနိုင်ဘူး
PS: ChaCha ကိုသွားပါ။ 😉
သြဂုတ် 31, 2010 မှာ 10: 10 AM
ကောင်းပြီ, ငါမှတ်ချက်မစတင်မီ, ငါနှင့်အတူတရားဝင်စီးပွားဖြစ်ဆက်ဆံရေးမရှိကြောင်းပြောပါစေ Douglas Karrသူ၏အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူ၏ဘလော့ဂ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ (သို့) သူ၏ခံစားချက်အမှန်ကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းရှိကောင်းရှိမည်သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲဝေဖန်သုံးသပ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမှကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ငွေရှာရန်ကျွန်ုပ်တွင်တိုက်ရိုက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါ။ ထို့အပြင်ဤထင်မြင်ချက်ကိုပြုလုပ်ခြင်းမှရရှိသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားသည်သက်ဆိုင်ရာမည်သည့်အရာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိကောင်းရှိကောင်းရှိနိုင်မည့် Self- သွေးဆောင်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
Nice post, Doug ။
မှ Ian Greenleigh
31:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 47
ငါနောက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဂလပ်စ်လိုချောစောက်တောင်စောင်းတွေလိုစိတ်ပူနေတယ်။ အဆုံးတွင်သင်ထောက်ပြသကဲ့သို့ဤအလေ့အကျင့်သည်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သာမန်ဖောက်သည်များအဖြစ်လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့ဇွန်းရှိခဲ့သည်။
31:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 07
နားလည်သည်, မှ Ian ။ သို့သော် FTC စည်းမျဉ်းများသည်လှည့်စားမှုကိုမပြောပါ။ ထုတ်ဖော်ရန်သာပြောဆိုသည်။
31:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 22
cnet ဆောင်းပါးသည်သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတိအကျမ ၀ င်နိုင်ဘဲနှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့ပြောသည့်အတိုင်း (ပြေလည်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ) အခြားဆောင်းပါးတွင်မည်သည့်အရာရှိနေသည်ကိုသင်တွေ့ပြီနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ ပို၍ သိသာလာသည်။ သွားနှင့်ကအများကြီးပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
31:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 25
ထို့အပြင် ftc အစီရင်ခံစာထဲကနေကိုးကား။
စက်တင်ဘာ 1, 2010 မှာ 12: 38 AM
@ripsup Wow ... ဒီတော့ ... ပိုဆိုးတယ်။ အကယ်၍ သင်မထုတ်ဖော်ပါကသင်သည်လှည့်စားနေသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ = -X
စက်တင်ဘာ 1, 2010 မှာ 12: 46 AM
"အဘယ်သူမျှမထုတ်ဖော်" + "မှားယွင်းသောကိုယ်စားပြုမှုလုပ်" = လှည့်စား
သင်“ SexyHotCheerTeen17” မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည် AIM နှင့်စကားပြောနေသည်ဖြစ်ရာသင်ပြtroubleနာတက်ရန်သင်စိုးရိမ်သောကြောင့်စောင့်ပါ။ ChaCha ကိုရုတ်တရက်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကထူးဆန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ 🙂
1:2010 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 01 မှာ
ငါနှင့်အတူတစ်တွဲဖက်ကြားဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်နောက်ကျောကိုငါ့ထုတ်ဖော်စာမျက်နှာနှင့်ဆက်စပ်သောအရာကို * မှာထားတော်မူ၏။ ပြီးပြီ
1:2010 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 08 မှာ
ကံမကောင်းစွာပဲ, Dave အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ် ဒီနည်းလမ်းကို David နဲ့သဘောတူဖို့ကြိုးစားပြီးပါပြီ။ သူကကျွန်တော် TOS ပေါ်မှာဖော်ပြလို့မရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဖော်ပြချက်တိုင်းမှာအစဉ်လိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
စက်တင်ဘာ 2, 2010 မှာ 8: 39 AM
ဒေါက်ဂလပ်, ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ၎င်း၏အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဟာသင့်ရဲ့ထုပ်ပိုးမှုအပေါ်ထောက်ခံစာအတုများတင်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုစာရင်းကသူတို့ဟာဥပမာပြနေသလိုခံစားရတယ်၊ ဥပမာအစိုးရက Napster နှင့်ယခင်ကမျှဝေထားသည့်ဆာဗာတွင်သီချင်းပေါင်းသန်းနှင့်ချီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆင်တူသည်။ သငျသညျဥပမာအနည်းငယ်အစွန်းရောက်ယူစေခြင်းငှါတူသောဒါဟာပုံဥပမာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်သနည်း ၀ ယ်သူများကိုလှည့်စားသောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်လှည့်ဖြားနေသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ခြင်းသည်သင်ဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။